Apple inobvumidza vanogadzira kuti vapindure kumatarisiro emaapps avo pane iOS neMac | IPhone nhau
Apple inobvumidza vanogadzira kuti vapindure kumatarisiro emaapplication avo paIOS neMac
Kune mazuva apo patinenge tisina kana nhau dzine chekuita neApple, asi neshanduro dzekupedzisira dzanezuro uye ikozvino nemabetas tanga takabatikana kwemazuva akati wandei. Maawa mashoma apfuura Apple yakatanga beta yekutanga yeApple 10.3, beta ine hunyanzvi hwayo hunowanikwa mu nyowani Tsvaga yangu AirPods chimiro, basa rinozotibatsira kuti tiwane zviri nyore mahedhifoni asina waya, tisingashandise chishandiso chakasvika paApp Store mwedzi wapfuura uye chakabviswa nguva pfupi yapfuura. Zviripachena kuti Apple yaive nebasa iri mupfungwa kuti isasiya vashandisi vayo vasingabatsiri mune izvi.
Asi imwe yenhau yatakakwanisa kuverenga mumanotsi eiyi vhezheni, tinoiwana muvagadziri, iwe waunoda ivo vanozogona kupindura kumashoko akasiiwa nevashandisi mumaapplication avo, chimwe chinhu icho panguva ino chaive chisingawanikwe mune chero epuratifomu yeApple, uye izvo mumaonero angu, zvakagadzira kumwe kudzivirirwa kune vanogadzira avo vaisakwanisa kuzvidzivirira kana kujekesa mibvunzo yakabvunzwa nevamwe vashandisi. Iri basa nyowani ragara riri rimwe rezvinonyanya kudiwa nevagadziri sezvo raive richiwanikwa pane mamwe mapuratifomu, seGoogle Play.
Parizvino Apple haisati yapa rumwe ruzivo nezvekuti yakawanda sei iyi nyowani basa ichave iripo, iyo inobvumidza vanogadzira vese maOS uye macOS pindirana nevashandisi vako nenzira yakapusa uye inokurumidza. Isu hatizivewo kana mhinduro iyo mugadziri anogona kupa ichaonekwa padyo nekomendi kana chete mushandisi uye musimudziri anogona kuiwana. Vashandisi vanozokwanisa kuzivisa kuApple kana mugadziri akatanga kushandisa zvisizvo iyi sarudzo, izvo zvinogona kukonzeresa kudzingwa kubva kuApple yekugadzira chirongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Apple inobvumidza vanogadzira kuti vapindure kumatarisiro emaapplication avo paIOS neMac
Vashandisi vari pachena kubheja pane USB-C pane iyo iPad
Apple inoisa pamberi Siri kuvandudzwa kweiyo nyowani iPhone 8